Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Diiday Inuu Argagixiso Ku Tilmaamo Weerarkii Las Vegas.
Trump oo Diiday Inuu Argagixiso Ku Tilmaamo Weerarkii Las Vegas.
Posted by Wariye Qaran	/ October 4, 2017
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa la weeydiiyay in falkii uu geystey Stephen Paddock ku tilmaami lahaa ‘mid argagixiso oo maxali ah’, balse wuu diiday in uu sidaas sheego. Trump wuxuu Paddock ku tilmaamay “nin xanuunsan”, isaga oo sidoo kale balanqaaday in ay dib u eegis ku samayn doonaan xakamaynta hubka Maraykanka.
Paddock ayaa hub badan gatay ka hor inta uusan weerarka qaadan, qolkii uu ka deganaa Hoteel Mandaleya Bay, waxaa laga heley 23 qori iyo kumanaan rasaas ah. Paddock ayaa wuxuu toogasho ku diley 59 qof, 500 kalana wuu dhaawacay kadib markii uu oodda uga qaaday rasaas ka dheceysay qori ah nooca darandooriga u dhaca.
Falkaas ayaa noqday dhacdadii ugu xumeyd oo dad intaa la’eg lagu laayo, taariikhda dhow ee Maraykanka. Markii uu waagu dilaacay, midab dabahi ah ayuu yeeshay darbiga dhismaha Hotel Mandaleya, meel ku beegan halkii uu rasaasta kasoo hurgufey Paddock. Waxaa la arki karaa daaqado burburay.
Waddooyinka, xarkaha jaalaha ah ee booliiska ayaa wali ku xeendaaban halkii ay wax ka dhaceen, iyada oo leelarkii ka ifayay caweyskii caanka ahaa ee Las Vegas la baqtiyay. Dad badan oo baroordiiq samaynaya ayaa isugu yimid meelaha qaar, kuwaas oo shumacyo shiday. Donald Trump ayaa weeraro argagixiso ku tilmaamay kuwo midkan ka qasaaro yar oo Maraykanka ka dhacay.
FBI-da waxa ay sheegtay in aysan helin wax raad ah oo muujinaya in Paddock uu xiriir la lahaa koox argagixiso ah oo Maraykanka dibadiisa ku nool. Erick Paddock oo ah ninka la dhashay Stephen Paddock ayaa sheegay in aabahood uu ahaan jiray nin bangiyada dhaca, kaas oo ku jirey liiska FBI-da ee dadka loogu doondoonista badanyahay.
Kaarto ay ciidamada dhajiyeen sanadkii 1969-kii ayaa waxaa ka muuqda sawirka Patrick Benjamin Paddock., waxaana ku qoran in ninkan uu qabo xanuunka maskaxda. Patrick ayaa la qabtay sanadkii 1978-dii isaga oo ku sugan gobolka Oregon. Waxa uu dhalay 4 wiil oo uu Stephen u weynyahay.